‘तरलता अभावले अझै ४-५ वर्ष पिरोल्छ’ | Banksnepal | Banking Nepali News
‘तरलता अभावले अझै ४-५ वर्ष पिरोल्छ’
जनक शर्मा पौड्याल ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा ३ दशक बढी बिताएका उनले सन् १९८४ नविल बैंकको शाखा प्रबन्धक पदबाट यात्रा सुरु गरेका थिए । नविलमा ११ वर्ष बित्दै गर्दा सञ्चालनको तयारीमा रहेको नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक (हाल एनआईसी एसिया) मा राम्रो अवसर आयो । त्यहाँ आधा दशक काम गरेका लक्ष्मी बैंकको स्थापनाकालमै आवद्ध भए ।
व्यवसायी राजेन्द्र खेतान बैंक खोल्न लाइसेन्स लिएर बसेका थिए । बैंक सञ्चालनका लागि नेतृत्व लिन भनेपछि पौड्यालले एनआईसी एसिया छाडे । तर, राष्ट्र बैंकले सीईओका लागि स्नात्तकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउन लागेको चर्चा चलेपछि १५ महिने अध्ययन बिदा लिए । लण्डनमा एक वर्षमै एमबीए सकिने भएपछि पौड्याल त्यतै लागे । पढ्दापढ्दै बेलायतको पीआर पाएपछि केही समय उतै काम गरे ।
आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर स्वदेश फर्किएको बताउने पौडेल ०६५ सालमा ग्लोबल आइएमई बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक बने । त्यसपछि नायव महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै गत एक वर्षदेखि सीईओ छन्, पौड्याल । प्रस्तुत छ, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यासँग केन्द्रित रहेर पौड्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
निक्षेपको व्याजदर बढाउन केही बैंकबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा देखियो । तर, ग्लोबल आइएमई बैंक चुपचाप बस्यो । यसको अर्थ बैंकमा पर्याप्त तरलता छ भन्ने हो ?
बैंक भनेको लामो समयका लागि सोच्ने संस्था हो । अहिले चाहियो भनेर आक्रामक ढंगले व्याजदर बढाइहाल्नु ठीक हो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी बजारमा अन्य बैंक कसरी अघि बढ्छन्, बजार कता जान्छ ? अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्छौं । हामीले अरुले जस्तै व्याजदर नबढाउनुको कारण बैंकमा अथाह तरलता छ भन्ने होइन ।